Dhug la’aanta Soomaaliya iyo Dhiiranaanta Wadamada Dariska la ah! – Somali Top News
Dhug la’aanta Soomaaliya iyo Dhiiranaanta Wadamada Dariska la ah!
March 5, 2019 March 5, 2019 Somali Top News	0 Comments
Tan iyo wixii ka danbeeyey Markii uu xukunka Dalka Ethiopia la wareegay ninka lagu magacaabo, Abiy Ahmed waxaa gudaha wadankaas iyo Geeska Africaba ku dhufatay Dabeyl aad u ordaysa oo loogu magac daray Isbadal doon.
Abiy Ahmed ayaa is badal dhan walbe ah waxa uu ka bilaabay gudaha wadankiisa Ethiopia isagoo xargaha ka wada furay bulsho dabranayd, Maadaama Xukuumadii isaga ka horaysah aysan Jabhadaha, Warabaahinta, Mucaaradka iyo Siyaasiyiintuba aysan wax awooda lahayn oo ay ahaayeen kuwo gacan adag lagu hayo, balse Abiy xor ayuu ka dhigay inkastoo uusan u aayin oo dhib badani ka qabsatay.
Si lamida isbadalkaas uu Dalkiisa ka sameeyey ayuu Siyaasada Geeska Africa is badal balaaran kaga sameeyey isagoo Shaxdiisa Safka hore kaga soo bilaabay Jabhado iyo Wadanka Eritrea oo muddo badan Colaadi kala dhacaysay isagoo Heshiisyo Taarikhi ah oo la yaab ka noqday Gobalka la galay dhinacyadaas.
Heshiiskii Taariikhiga ahaa ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea ka dib waxa uu Abiy Ahmed Dabeysha dhaq dhaqaaqa isbadal doonka ah ku soo daray Dalka Soomaaliya, Isagoo socdaal Muran dhaliyey ku tagey Magaalada Muqdisho ka dib markii uu ka dhawaajiyey in Ethiopia iyo Soomaaliya ay hal Madaxweyne yeelan doonaan mustaqbalka dhow taas oo Dad badani u fasirteen inuu doonayo Abiy in Soomaaliya uu hoos geeyo Xukuumada Adis-Abab, balse Dowlada Soomaaliya ayaa hadalkaas gaashaanka u daruurtay iyadoo macno kale u yeeshay iyo in Dalalku is kaashanayaan uun kaliya.
Ha yeeshaa, Madaxda Saddexda wadan ayaa markii ugu horaysay Shir Saddex Geesood ah ku yeeshan Magaalada Asmara ee Caasimad Eritrea,waxayna halkaas kaga dhawaaqeeun iskaashi Saaxiibtinimo, Dhaqaale, Amni oo saddexdaas wadan yeesheen, Balse Shakiga iyo tuhunaka ay dad badani ka muujiyeen iskaashigaas ayaa ahaa in aysan goobta ka muuqan Madaxda Wadamada Kenya iyo Jabuuti oo qudhoodu ku yaal Buqcada Geeska Afiraca.
9 November ee Sanadkii 2018 ayaa Sidoo kale Madaxda Saddexda Wadan ee Abiy, Farmaajo iyo Isais Afwerki waxay kulan ku qaateen Asmara.
9 November ee Sanadkii 2018 ayaa Sidoo kale Madaxda Saddexda Wadan ee Abiy, Farmaajo iyo Isais Afwerki waxay kullankoodii labad ku yeesheen Magaalada Bhar Dar ee Wadanka Ethiopia, waxaana War murtiyeedkii shirkaas lagu xoojiyey qodabadii shirkii hore iyadoo lagu balamay in Shirka Saddexaadna lagu Qabto magaalada Muqdisho ee Soomaaliya, balse xaalku hadda waji kale ayuu yeeshay.
Dabeyshii Isbadal doonka ee Abiy Ahmed ayaa hadda dhan kale u jihaysatay ka dib Markii uu maalmo ka hor Madxaweynaha Dalka Kenya Uhuru Kenya gaaray Magaalada Adis-Ababa ee Xaruunta Wadanka Ethiopia, iyadoo ay Asbuucyo ka hor Kenya Albaabada u laabtay Xiriirkii ay la lahayd Wadanka Soomaaliya oo ay Daris yaal yihiin.
Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ee Muran Xudeedka Badda ayaa saameyn togan ku yeeshay dhaq dhaqaaqii Soomaaliya ee Siyaasada Geeska Africa, Kenya Sidoo kale waxa ay wacad ku martay inay kaashan doonto wadamada dariska la ah si ay xulufo uga dhigato, waxayna shafka gacanta ugu garaacday Soomaaliya oo ay sheegtay inay xitaa cuna qabatayn ku soo rogi doonto.
Yeelkeede Sheekada xiisaha leh ayaa noqotay ka dib markii Saddexda hogaamiye ee Abiy Ahmed, Uhura Kenya iyo Afwerki ay kullan Saddex Geesood ah ku yeesheen Magaalada Asmara, iyagoo sheegay inay iska kaashanayaan, dhinacyada Amniga,Siyaada iyo dhaqaalaha, Waxaana Kursiga keydka la dhigay Soomaaliya oo horay qeyb uga ahayd Saddex Geesoodka iskaashiga Barriga Africa, xitaa Afarey loogama dhigin Soomaaliya oo waxaa ishkaashiga ku sii biiray Hogaamiyaha South Sudan Salvakiir.
Soomaaliya ayaa hadda u muuqata in la gacan bidixeeyey oo aysan awalba saameyn badan ku lahayn Siyaasada Geeska Africa, taas badalkeedana aan Madaxda Soomaaliya waji iyo iskaashi midna laga rabine ujeedka dhabti ahi ay tahay in Isha lagu hayo badda dheeraran ee Soomaaliya oo uu Khayraad badani dhex fadhiyo, ku darsoo Afar Dekadood ayaa loogu yaboohay inuu Maalgashado Abiy Ahmed.
Soomaaliya iyo Ehiopia ayaa waxaa ka dhaceeya Colaad soo jireen ah, waxaana la isku hayaa Arimaha dhulka Deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ay horay ugu dirirtay Dowlada Siyaad Barre.
Horay Siyaasiyiin Aqoonyahano iyo waxgarad goob joog u soo ahaa Xaaladaha Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa ka digay bilowgii hore markii ay Dowlasa Soomaaliya sheegtay in baal cusub lala furayo Ethiopia, waxa ayna Dadkaasi farta ku godeen inaan Heshiis Ethiopia la gashay soomaaliya lagu caano maalayn Ehiopiana ay wali tahay tii la yaqiinay.
Madaxweynaha Soomaaliya Mohamed Abdullahi Farmaajo ayaa maanta ku wajahan Magaalada Adis-Aabba ee Wadanka Ethiopia, bacdamaa uu ka carooday in Uhura buuxiyey booskii uu ku lahaa Saddex Geesoodka Abiy Ahmed.
C/Raxmaan Cabdi Shakuur oo ah Hogaamiya Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadajir ayaa waxa uu sheegay in Safarka Farmaajo daaranyahay inuu ashtako ka yahay Saddex geesoodka Cusub ee dabadiis la unkumay isagoon laga talo galin iyo Wakiilka Somaliland ee Ethiopia oo lagu casuumay Casho sharaf loo sameeyey hogaamiya Kenya Uhura.
Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ayaa yiri: “Barrito lagama yaabo in Abiy Gaoonka ugu yimaado Farmajo Baambeydana loo garaaco, Heesta Calanka Soomaaliyana loo qaado”. isagoo ula jeeda in ay soo af jarantay Dantii laga lahaa Farmaajo.
Si kastaba ha ahatee Soomaaliya ayaa dhex dabaalanaysa mowjado adag oo Siyaasadeed, ku waas oo dhinacyo kala duwan kaga imaanaya, Wali Soomaaliya ma yeelan Awood Ciidan,dhaqaale oo ay Haa iyo Maya ku oran karto.
W/Q: Hussein Nor Hussein
← Madaxda ugu sareysa dalka oo ku kala maqan safarro Dibadda ah!!!
Somali president lands Ethiopia for bilateral talks →
Maxaa Hor Taagan In La Dhiso Ciidan Awood Leh Oo Soomaaliyeed?